Dowlada Itoobiya oo yeelatay dowlad deegaankii 11-aad oo qaata madax banaani | Dayniile.com
Home Warkii Dowlada Itoobiya oo yeelatay dowlad deegaankii 11-aad oo qaata madax banaani
Guddiga Doorashooyinka qaranka ee dalka Itoobiya ayaa sheegay afti laga qaaday qowmiyado ku nool deegaanka Shucuubta Koonfureed natiijada ka soo baxday ay muujineyso qowmiyadaha aftida laga qaaday iney u codeeyeen iney sameystaan dowlad deegaan la magac baxay Koonfur Galbeed.
Guddiga oo maanta oo Sabti ah shaaciyey natiijada aftida shacabkaasi laga qaaday ayaa sheegay 96% shacabkii codkooda dhiibtay iney u codeeyeen iney noqdaan deegaan madax bannaan oo ka go’ay Deegaanki Shucuubta Koonfureed ee ay ka tirsanaayeen.
Deegaankan cusub ee Koonfur Galbeed la magac baxay ayaa noqonayaa deegaakii labaad ee ku soo biiro qaab dhismeedki dowlada Federaalka tani iyo marki Abiy Axmed uu hoggaanka dalka Itoobiya qabtay, iyada oo sanadki horana golaha uu meel mariyey dowlad deegaanka Sidaama oo noqday deegaanki 10-aad oo xubin ka ah dowladda Federaalka.
Previous articleShirka Saddex billaha ah ee Hay’adda Socdaalka iyo Agaasimaha guud ee Hay’adda Socdaalka oo soo bandhigay qorshaha seddexda bil ee soo socota Sawiro
Next article𝙍𝙖𝙮𝙨𝙖𝙡 𝙬𝙖𝙨𝙖𝙖𝙧𝙚 𝙍𝙤𝙤𝙗𝙡𝙚 𝙞𝙮𝙤 𝙈𝙖𝙙𝙖𝙭𝙬𝙚𝙮𝙣𝙚 𝙁𝙖𝙧𝙢𝙖𝙖𝙟𝙤 𝙞𝙮𝙤 𝘿𝙖𝙬𝙡𝙖𝙙𝙙𝙖 𝙌𝙖𝙩𝙖𝙧 𝙈𝙖𝙭𝙖𝙮 𝙆𝙪 𝙝𝙚𝙨𝙝𝙞𝙮𝙚𝙚𝙣 ?
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay munaasabadda salaanta calanka si loo weyneeyo Maalinta asaaska Calanka ee 12-ka Oktoobar,...